Njengesixhobo sokudibanisa ibhanti yokuhambisa, i-vulcanizer kufuneka igcinwe ngendlela efanayo nezinye izixhobo ngexesha nasemva kokusetyenziswa ukwandisa ubomi bayo benkonzo. Okwangoku, umatshini we-vulcanizing oveliswe yinkampani yethu unobomi obungaphezulu kweminyaka eli-10 ukuba usetyenziswa ngokufanelekileyo kwaye ugcinwa.
Le miba ilandelayo kufuneka ihlawulwe xa kugcinwa i-vulcanizer:
1. Indawo yokugcina ye-vulcanizer kufuneka igcinwe yomile kwaye ingena umoya ukuthintela iisekethe zombane ezifumileyo ngenxa yokufuma;
2. Sukusebenzisa i-vulcanizer ngaphandle ngeentsuku zeemvula ukunqanda ukungena kwamanzi kwibhokisi yolawulo lombane kunye neplate yokufudumeza;
3. Ukuba indawo yokusebenza ifumile kwaye inamanzi, xa uqhaqha kwaye uhambisa umatshini wokukhupha, sebenzisa izinto emhlabeni ukuwuphakamisa, kwaye ungavumeli umatshini wokuhluza uqhagamshelane ngqo namanzi;
4. Ukuba amanzi angena kwipleyiti yokufudumeza ngenxa yokusebenza gwenxa ngexesha lokusetyenziswa, nceda unxibelelane nomenzi ukuze alungiswe kuqala. Ukuba ukulungiswa okungxamisekileyo kuyafuneka, ungavula isiciko sepleyiti yokufudumeza, uthele amanzi kuqala, emva koko usete ibhokisi yolawulo lombane ekusebenzeni ngesandla, yitshise ibe yi-100 ℃, yigcine kubushushu obungagungqiyo kangangesiqingatha seyure, yomile umgca, emva koko Ncamathisela ibhanti kwimo yemanyuwali. Kwangelo xesha, kufuneka kuqhakamshelwe umenzi ngexesha lokutshintsha ngokupheleleyo isekethe.
5. Ukuba i-vulcanizer ayifuni ukusetyenziswa ixesha elide, ipleyiti yokufudumeza kufuneka ishushu rhoqo emva kwesiqingatha senyanga (iqondo lobushushu lisetelwe kwi-100 ° C), kwaye ubushushu kufuneka bugcinwe kangangesiqingatha seyure.